Karelia राष्ट्रिय पोशाक: विवरण, फोटो
राष्ट्रिय पोशाक Karelia - प्रश्न अझै पनि पुरातात्त्विक उत्खनन र अन्य को डाटा द्वारा निर्देशित छन् जो इतिहासकारहरूले, द्वारा अध्ययन भइरहेको छ जानकारी को स्रोतहरु। पुरातन मान्छे के लगाउने भएको थियो, जो को संख्या हाल 60 हजार मान्छे मा खडा (अन्तिम जनगणना अनुसार), यो ज्ञात छैन। तथापि, वैज्ञानिकहरूले कसरी 18 औं शताब्दीमा यसको प्रतिनिधिहरु राख्नु र पछि गर्न निर्धारण गर्न सक्षम थिए।
राष्ट्रिय पोशाक Karelia सामाग्री
वस्त्र - विशेष गरी लागि दैनिक पहनने डिजाइन - आन्दोलनहरु hamper हुँदैन, त्यो प्रयोज्य आवश्यक थियो। राष्ट्रिय पोशाक Karelia अक्सर सबैभन्दा सुलभ सामाग्री को मद्दत सिर्जना गरिएको छ। अधिकांश मानिसहरू स्वतन्त्र "आधार।" उत्पादित यो बोट भेडा लागि, seeded सन र सन क्षेत्रहरू।
राष्ट्रिय पोशाक Karels अक्सर, सन मुद्दा संग shilsya विशेष मा कामदारहरूको लागि वस्त्र सम्बन्धित छ। बाहिरी कपडा ऊन मिश्रण कपडा एक सनी आधार भएको थियो। , Calico प्राप्त गर्न chintz मेला र व्यापार पसलहरूमा गएर, मानिसहरूले प्रतिनिधिहरु र कारखाना सामाग्री को इन्कार नगर्नुहोस्।
राष्ट्रिय पोशाक Karels लागि निर्माण सामाग्री को विकल्प, भौतिक र मानव अवस्था निर्भर। धनीमानीहरूले अक्सर परम्परागत सिलाई रेशम लुगा प्रयोग गरेर brocades महंगा कपडे रुचाउँछु। पशु खाल बनेको जूता, तिनीहरूले पनि, टोपी बनाउन पन्जा resorted।
कसरी एक मानिस पोशाक गर्न
हामी विपरीत लिङ्ग को लुगा तुलना भने, पुरुष महिला outfit मूल योजना मा गुमाए। शर्ट-ब्लाउज, बंदरगाह को अंगरखा reminiscent, परम्परागत बेल्ट - राष्ट्रिय पोशाक Karels लगाएका। फोटो तिनीहरूले विरलै एक टोपी संग पूरक गर्न भूल भनेर देखाउँछ।
मजबूत सेक्स को प्रतिनिधिहरु दुई प्रजातिका शर्ट लगाएका। यो छोटो ज्याकेट सन देखि गरे, संकीर्ण अडान-अप कलर संग endowed हुन सक्छ। वा उहाँले सुरुवाल धारण जो लामो संस्करण, आफ्नो घुँडा, homespun क्यानभास बनेको गर्न पायो। संकीर्ण कपडा: प्यान्ट विविधता द्वारा चिन्ह लगाइएको छैन। शर्ट अक्सर द्वारा पूरक छन् स्कार्फ।
प्रायजसो छाला बनेको मा करेलियन पोशाक अभिन्न भाग हो भनेर बेल्ट पनि बुना गर्न सकिन्छ। बेल्ट दुई पालैपालो मा परंपरागत मानिसहरू। प्रतिबन्धित शर्ट पोशाकहरू छोराछोरी, प्रारम्भिक किशोर मात्र पहिलो खण्ड पछि भरोसा प्यान्ट, उहाँले व्यक्तिगत plowed।
के महिला पहना छ
, Karels राष्ट्रिय पोशाक को fairer सेक्स लागि डिजाइन के हो? महिलाहरु परम्परागत शर्ट वा स्कर्ट वा sundress पूरक। sundress धारण थियो भने, बेल्ट यसलाई अन्तर्गत लुकाउनु भएको थियो। माथि खराब Omen रूपमा दराज को यो तत्व दिन - बेल्ट warding एक प्रकारको रूपमा सेवा महिलाहरु प्रेतहरू देखि बचाउँछ। पोशाक, एक एप्रन संग संयोजन गर्न गरिएको थियो फरक रंग को छ।
यो छुट्टी लागि डिजाइन एक सानो विभिन्न किरा देख्यो। यस मामला मा म पछाडि disposed एक एप्रन तार थियो, र उज्ज्वल रिबन पूरक। यसमा तपाईं केटी विवाह वा अझै पनि श्री दायाँ लागि खोज मा बस्नुहुन्छ देख्न सक्छौं। पहिलो मामला मा, सामाग्री को टुक्रा दोस्रो, अगाडि बाँधिएको - छेउमा।
उत्सव पोशाक ध्यान को तैयारी मा शाल भुक्तान थियो। सहायक महंगा सामाग्री, कढाई संग सजाया, fringe अनुपस्थित सिर्जना भएको थियो। आफ्नो काँध मा कुरा sprinkles, को अन्त्य को छाती जोडिएको थियो।
सुविधाहरू बाहिरी कपडा
"सडक गर्न" इरादा थियो Karels मा राष्ट्रिय पोशाक के हो? प्रायजसो, त्यस्ता वस्त्र homespun कपडा, क्यानभास, प्रयोग furs बनेको छ। Kaftan दुवै sexes त्यस्तै थियो। को backrest पछाडि कमर मा ruffles थियो, सीधा वा काटन हुन सक्छ अक्सर। को आस्तीन मुख्य रूप लामो गरिन्छ।
कोट Karelians लामो यात्राको सबैभन्दा अक्सर प्रयोग। "को कमर मा।" कोट वा लुगा: मोडेल विविधता फरक थिएन यी गरिब मानिसहरू sheepskin प्रयोग गरेका छन् सिर्जना गर्न, धनी फर hares Foxes रुचि। बटन दुई वा तीन हुन सक्छ।
पनि ऊनी स्कार्फ, टाँसन चिसो मौसम मा प्रयोग गरिन्छ। फर, छाला बनेको mittens, भेडा गरेको ऊन देखि बुना, लोकप्रिय र Mittens थिए।
यो जूता जस्तो
जूता - जो तत्व कुनै उल्लेख संग, पूर्ण Karelia राष्ट्रिय पोशाक वर्णन गर्न सक्दैन। क्लासिक जूता को छन् संग दराज को भाग को विवरण सुरु गर्नुपर्छ rawhide। यस्तो जूता लागि एडी र सहज नरम एकमात्र को अभाव द्वारा विशेषता थियो। उत्तर Karelia मोडेल फर इष्ट noses cocked गरेका थिए।
एक विशिष्ट काम जूता - जूता, जूता कवर भनिन्छ। तिनीहरूले एक विस्तृत शीर्ष, ज्यादातर छाला बनेको द्वारा प्रतिष्ठित थिए। पनि लोकप्रिय विशेष गरी यदि एक "फोहोर" काम सामना, birchbark जुत्ता थिए। तिनीहरूले galoshes सदृश buckles बिना गरियो। बिस्तारै, को "घर" उत्पादनहरु कारखाना मोडेल बदलिएको थियो।
टोपी - यो करेलियन राष्ट्रिय पोशाक कल्पना थिएन जो बिना कुरा हो। क्लासिक विकल्प को फोटो अंतर रहन्थ्यो छन्। बीचमा प्राचीन headgear जो मूलतः जंगल मा काम अघि धारण स्क्रीन, उल्लेख गर्न सकिन्छ। उत्पादन, एक हुड को फारम थियो सेतो क्यानभासमा sewed।
को चिसो महिनामा मानिस भेडा वा खरायो फर बनाइएका अक्षर इष्ट। तिनीहरू बाहिरबाट लगभग आधुनिक earflaps जस्तो। शीर्ष रूमाल पूरक अविवाहित बालिका, headscarves, headbands लगाउने, र विवाहित हुनुहुन्छ जो महिलाहरु, आफ्नो टाउको ochipok सजी। प्रयोग podnizi मोती कढाई: सजावट headgear ध्यान।
कढाई - सजाने वस्त्र, सक्रिय लागि शताब्दीयौंदेखि Karels प्रयोग गरिन्छ लागि सबैभन्दा लोकप्रिय विधिहरू को एक। ढाँचा प्रधान विचार बडाई भिन्नता, solemnity। मालिकको छविहरू प्रेम शानदार जनावरहरू, चरा। कढाई शर्ट, sundresses, टोपी को उत्पादन मा प्रयोग भएको थियो। साथै, महिला आफैलाई परम्परागत सजावट गर्न, मोती, सुन, चाँदी बनेको उत्पादनहरु छनौट सीमित छैन।
यी करेलियन वेशभूषा द्वारा नजिकै आधारभूत गुण हो।
सैन्य-ऐतिहासिक सेन्ट पीटर्सबर्ग मा Artillery, ईन्जिनियर र सिग्नल कोर रक्षा मंत्रालय को संग्रहालय
मान्छे - यो मान्छे को एक समुदाय हो
अब्खाजियन् Abkhazians प्रतीक र नैतिकता
संक्रमणको पोषण: यो कसरी पीडा बिना?
आयाम जैकेट। तालिका महिला आकार
उत्पादन विशेषताहरु तपाईं कसरी हिज्जे गर्नुहुन्छ?
Hillside Resort पटाया 3: * समीक्षा, कोठा को वर्णन, सेवा। पटाया बिदाहरू